'UMSINDISI' UKUPHOSA NGOKU: IINGCEBISO ZOKUPHOSA KUNYE NENDLELA YOKUFAKA ISICELO - IINDABA
'Umsindisi' Ulahla ngoku: Iingcebiso zokuphosa kunye nendlela yokufaka isicelo
Umboniso wonyani we-CBS owasindayo uvule ikhosi yexesha lama-43 & 44. Nazi iindlela ezilula zokufaka isicelo kunye nezindululo ezimbalwa malunga nokuphoswa, kunye neengcebiso ezilungileyo ezivela kwi-Millennials vs i-Gen X ephumeleleyo u-Adam Klein.
Ukuphosa kuvuliwe kwiWebhusayithi ye-CBS
Kwasekuqaleni kuka-Agasti, iakhawunti yeendaba zosasazo lwasasaza lwenza ukuba kuqondwe ukuba ukulahlwa kuyaqhubeka kumaxesha angama-43 kunye nama-44. Kwimeko apho ubuza ukuba kutheni umboniso ungalahli amaxesha onyaka angama-41 no-42, ngokufanelekileyo, sele besongele ukufota.
Ukusinda kwi-web site ye-Survivor ithi baphosa ngokuchanekileyo ngoku, ke sebenzisa ngoko nangoko ukuba ungathanda ithuba lokuba kwixesha le-43!
Abalandeli abakhulu, amaXesha okuQala (nawo wonke umntu ophakathi), nceda ufake isicelo NGOKU malunga nexesha elizayo loMsindisi. Siza kuba sithatha ixesha lokudlala i-43 ngolunye usuku phakathi ku-Meyi 2021 nasekuqaleni kukaJulayi 2021, itsho iwebhusayithi, nangona loo mgca wokugqibela ngokucacileyo ungumbhalo-ngaphakathi kwenxalenye ye-FAQ, ithi, imihla yokufota iyalinga kula maxesha mabini alandelayo. Bazakuba kukugqitywa kuka-Epreli ngo-‘Usinde ama-43 ’kunye neveki yokuqala kaJuni ku-‘Usinde ama-44.’ Ukunikezelwa kwexesha lokuthatha ifilimu kunye nohambo malunga neentsuku ezingama-46.
Ufumana njani iCast
Iingcebiso zokuphosa iphepha lewebhu kule webhusayithi icebisa abantu abaza kuba kukhuphiswano ukugcina ividiyo yabo eluncedo bengaphantsi kwemizuzu emithathu ngobukhulu kwaye babeyinyani yabo.
Kufuneka sazi ukuba ungubani ngokwakho. Ubuchule bakho bobomi buza kukuvumela njani ukuba uphumelele umdlalo? Uza kusebenza njani kunye namanye amalungu esizwe esahlukileyo? Xa uchaza isiqu sakho, khumbula ukuba ucaphule kwimizekelo yobomi bokwenyani. Siyalithanda ibali! utshilo iingcebiso zokuphosa iphepha lewebhu.
Ukwenza ividiyo yokuphosa ayikokubekwa ngokudibeneyo kwesikethi esisebenzayo okanye ukuhambisa ezona zambatho zintle. Sikhangela abantu abakhoyo kwaye sifuna ukubona oyinyani.
Ukuba uvela kwindawo yenoveli okanye indawo yesizwe, thetha ngendawo ovela kuyo, indlela eyinxalenye yomlinganiswa wakho, okanye indlela enokukuvumela ukuba wenze ngokufanelekileyo kwi-Survivor. Ukuba unokuba nomsebenzi wokutsala umdla, thetha ngomsebenzi wakho kunye nendlela ezi zakhono ezinokukuvumela ngayo ukuba uphumelele umboniso.
Nceda usibonise IHLABATHI LAKHO, sebenzisa iifoto, usise kukhenketho, wonwabe ngale nto!
Kwividiyo yeYouTube, ophumeleleyo ophumeleleyo uAdam Klein ucebisa abagqatswa ngeendlela ezilula zokwenza uphicotho-zincwadi olumangalisayo-ubuxoki ubufota udliwanondlebe lokuvuma izono kwimiboniso oyithandayo.
Ngaba ndingacinga ngale nto ndiyithethayo kwividiyo yam yovavanyo, kufanelekile apha, ngoku ngoku, njengesivumo kumdlalo? ' Utsho uKlein.
Kukho inani leeasethi kwimarike indawo onokuthi uyihlawule ngesikhokelo sokuvavanywa. U-Klein unenye kwaye kunjalo no-Jodi Wincheski, owayengumvelisi we-CBS, owayebandakanyeka ekutyhilweni koMsindayo kunye nohlanga oluMangalisayo. Ungazama iwebhusayithi yeWincheski apha.
Abasindileyo babuyela kwixesha labo lamashumi amane lokuqala ngolwesiThathu, nge-22 kaSeptemba 22. Ixesha lamashumi amane anesibini liza kudlala phakathi kwentwasahlobo yowama-2022.
I-100 yeelola yeentyatyambo
ziqala ngabani ixesha emmys
oodade be-slaton ngoku
Terry bradshaw unayo